#Raysal Wasaraha Sudaan oo ka mid ah Guddiga dhaqaalaha Qaranka Soomaaliya » Axadle | Get Latest News From Horn of Africa
#Raysal Wasaraha Sudaan oo ka mid ah Guddiga dhaqaalaha Qaranka Soomaaliya
By WARIYAHA CAALAMKA On Aug 19, 2019 Last updated Aug 19, 2019
Ra’isalwasaraaha cusub ee dowladda Suudaan Cabdalla Xamduuk ayaa waxaa uu xubin ka yahay Guddiga dhaqaalaha Qaranka ee Sanad ka hor uu magacaabay Madaxweynaha Soomaaliya.
Ninkan dhaqaaleyahanka ah waxaa u xushay in uu noqdo Ra’isalwasaaraha dalka Suudaan Dalladda mucaaridka ah ee Suudaan oo bilihii la soo dhaafay wadahadalka kula jiray Golaha Milatariga ee dalka Maamulaya.
Guddiga dhaqaalaha Qaranka Soomaaliya, ayaa waxaa la magacaabay sanad ka hor Bishii August 2018,waxaana ay ka koobanyihiin Ajaanib iyo Soomaaliya.
Magacyada Guddiga dhaqaalaha Qaranka ee Soomaaliya ee Soomaalida iyo Ajaanibta isugu jira ayaa waxaa ay kala yihiin.
Dr. Abdalla A. Hamdok: Waxaa uu mas’uul sare ka ahaa UNECA, PhD waxaa uu ka heysaa dhaqaalaha, dalal badan oo bariga dhexe iyo Afrika ayuu la shaqeeyey, dalalka Afrikaanka ah ee uu caawiyey waxa ka mid ah Zimbabwe, Cote d’ivoire iyodalkiisa Sudan ee uu hadda Ra’isalwasaaraha ka noqday.